Semalt: Yeka ukuthi ukukhishwa kwe-inthanethi kuzokuphakamisa kanjani umlando wakho ngamunye
Kungakhathaliseki ukuthi unomabhizinisi wedwa, ibhizinisi eliphakathi nendawonoma ingxenye ye-franchise ngaphakathi kwenhlangano enkulu, ukuqwashisa ngemikhiqizo kubaluleke kakhulu ekukhuleni kwakho njengoba kunjalokungaba kubalulekile kunoma iyiphi inhlangano enkulu. Ungase ucabange ukwakha ukuqwashisa kwe-brand yakho njengamanje kuyinkunkumawezinsiza, ngoba ungumane osomabhizinisi noma umnikazi webhizinisi oziqashile kodwa lokhu kuhluke kakhuluyeqiniso. UMichael Brown kusuka Semalt Amasevisi Wezinhlelo Zedivayisi abelana ngokuqondisisa ukuthi ukukhishwa kwe-intanethi kuzokwenza kanjanikuvusa ukubonakala kwakho nokuthuthukiswa kwebhizinisi elikhuthaza - a good weight loss pill.
Ukwakha umkhiqizo kubalulekile ekusunguleni uxhumanonamakhasimende. Abantu batshela abanye mayelana nesipiliyoni esihle, ngakho-ke igama le-umlomo lisakazeka futhi likhuthazaukuthuthukiswa kwama-Businesses. I-buzz izokwenza ibhizinisi lakho likhudlwana, futhi, mhlawumbe, uzothola ukunakwa kwezindaba.
Ngemva kwakho konke, nguwe. Njengomsunguli wenkampani, wenayi-CEO kanye nombuso wenhlangano. Ibhizinisi lakho lingaba likhulu futhi liphumelele njengoba ufuna. Abanyeabantu baphupha ngale ndlela yokuphumelela, kuyilapho abanye abantu bekhetha ukugcina inkampani yabo encane futhi iphathekayo. Nomaindlela, isizathu esiyinhloko sokusebenzisa umkhiqizo obonakalayo wukuthi amakhasimende azozihlanganisa nezinsizakalo noma imikhiqizo yakhokanye nani, njengomuntu ngamunye.
Cabanga ngobuntu obuhle obuningi, owake waqala amancane,uye wavuka phezulu ngokukwakha uphawu oluqinile. Cabanga ngoColonel Harland Sanders we-KFC, i-franchise yokudla okusheshayo yenkukhuowaqala e-cafe encane eKentucky e-U..S. ngonyaka wama-1930 bese wanda eNyakatho ne-Ireland ngo-1965 njengengxenyeyalokho okwakusuke kuba yi-franchise enkulu. Kodwa-ke, umuntu wangempela ngemuva kwakho konke, "UColonel" ubuso futhi ngemuva kwenkampani.Ngenxa yalokho, ukukhishwa kwe-KFC kuphumelela kakhulu ngenxa yomkhiqizo wakhe ophakeme, ubuntu obuhlukile, obuthembekileizithembiso kanye neziqinisekiso. Ngaphezu kwalokho, ibinzana labo elithi "I-Finger Lickin 'Elihle" elibambe iqhaza lenza umtapo ongenakulibaleka oholele abantu.
Ungakhulisa kanjani iphrofayli yakho ngokudala umkhiqizo oqinile?
Hamba ngqo eqophelweni ngegama elinamandla ne logo.Ngokusebenzisa amagama ambalwa kuphela, kumele uthumele umlayezo walokho ibhizinisi lakho elikumele.
Lezi zinsuku, noma ubani angakwazi ukusetha iwebhusayithi eyenza yonainkampani ibonakala ibanzi kunokuba ikhona ngempela. Ngezinye izikhathi lokho kuyinto enhle, kuye ngokuthi unikeza imikhiqizo noma amasevisi.Hlola izincintiswano zakho kanye namasu abo okufaka uphawu, bese ubhala ngezindlela eziningana ongabathumela ngazo.
Ukwakha umkhiqizo we-intanethi ukuphakamisa iphrofayela yakho kungenziwa nge:
Izinsiza ezibucayi ezibukwayo -izithombe noma izithombe, ihluzo
imikhankaso ye-imeyili kanye namaphephandaba
Ukusekelwa okuphezulu kwe-notch kanye nokuxhumana
Ukukhwabanisa kuyisu. Yindlela yokutshela yonaamakhasimende ukuthi isevisi yakho noma imikhiqizo yakho kufanelekile ukuyisebenzisa. Ukugunyaza ku-intanethi kudinga indlela eqhubekayo. Ukuhlanganiswa kokubukwayofuthi okuhlangenwe nakho okwenzekayo ku-intanethi kubonisa ubuso bakho njengenkampani engaxhunyiwe ku-intanethi. Njengomabhizinisi noma umnikazi webhizinisi elincane,uzothola kuzuzisa ukudayisa ibhizinisi lakho ngaphansi kwegama elibonakalayo.